Madaxweyne Gaas oo sheegay in uusan dooneyn Xil kororsi (dhegayso) – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo sheegay in uusan dooneyn Xil kororsi (dhegayso)
Maarso 7, 2018 3:16 g 0
Iyada oo siyaasiyiinta Puntland qaar kamid ah oo ah musharixiin u tagaan jagadda Madaxtinimadda Puntland ee 2019 ay shaaciyeen in Gaas doonayo waqti kororsi ayaa waxaa markii ugu horreysay ka hadlay Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas oo la hadlay laanta Afka Somaaliga ee BBC ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in doorashada Puntland ay dib uga dhacayso xilligii loo qoondeeyey,Gaas ayaa sheegay in uusan laheyn awood uu xilka ku kororsado.
Dhinaca Kale Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay Marka la gaaro 08 January 2019 in doorashadu si rasmi ah uga dhacayso deegaanada Puntland isla markaana aysan jirin wax muddo kororsi ah oo xukuumadiisu ay waddo, asaga oo yiri, “doorashadu marka ay gaarto xilligeeda waxa ay u dhacaysaa si mug iyo miisaan leh oo ah 08 January 2019, waxaana u caddaynayaa siyaasiyiinta in aysan haba yaraatee jirin wararka sheegaya in muddo kororsi ay jirto.”
Qaar kamid ah Siyaasiyinta Puntland ee dalka dibadiisa ku sugan ayaa maalmihii u dambeeyey shaaciyey in Gaas uu damacsanyahay waqti kororsi.
Cuduro ka dilaacay degaanka Saaxo ee Gobalka Mudug (dhegayso)